परिवार लिएर निक भारत आउदै, कहाँ दिदैछिन् प्रियंकाले इन्गेजमेन्ट पार्टी ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
परिवार लिएर निक भारत आउदै, कहाँ दिदैछिन् प्रियंकाले इन्गेजमेन्ट पार्टी ?
भदौ १ गते, २०७५ - १०:५१
काठमाडौं। बलिउडकी बोल्ड अभिनेत्री प्रियंकाको इन्गेजमेन्टको क्रममा भेटघाट राम्रोसँग नभएको भन्दै निक तथा उनको परिवार भारत आउँदै छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यही अगष्ट १८ तारिखमा प्रियंका चोपडाले इन्गेजमेन्टको खुशियालीमा भब्य पार्टीको आयोजना गर्न लागेकी छिन् ।
यही पार्टीमा प्रियंका र निकका परिवारले उनीहरुको विवाहको घोषणा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । केही दिन अगाडि अभिनेत्री रविना टण्डनले निकले प्रियंकालाई इन्गेजमेन्टमा लगाइदिएको औंठी सहितको फोटो शेयर गरेकी थिइन् । उक्त औंठीको मुल्य २ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको बताइएको छ ।
प्रियंका भारतीय परम्परा अनुसार नै विवाह गर्न चाहान्छिन् । सबैकुरा योजना अनुरुप भएमा प्रियंका छिट्टै नै निक जोनसकी बेहुली बन्नेछिन् । केही दिन अघि निकले प्रियंकाका साथ परिवार बसाल्न चाहेको कुरा पनि बताएका थिए । यो कुराबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि निक र प्रियंका विवाहको तयारीमा जुटीसकेका छन् ।
भदौ १ गते, २०७५ - १०:५१ मा प्रकाशित